ट्वींकल अक्षय कुमारको हाउसफुल–४ कुनै पनि हालतमा हेर्न चाहन्नन्, आखिर किन ? | Ratopati
अर्थात् मानिसहरुलाई यो फिल्म मन परिरहेको छ ।
तर बलिउड अभिनेत्री र अक्षय कुमारकी श्रीमती ट्वींकल खन्नाले यो फिल्म कुनै पनि हालतमा हेर्न नचाहेको अक्षयले जानकारी दिएका छन् ।
बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा अक्षयले ट्वींकलले यो फिल्म कुनै पनि स्थितीमा नहेर्ने आफूलाई बताइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ट्वींकललाई यस्तो प्रकारको कमेडी फिल्म मनै पर्दैन । उनले भने, उनी यस प्रकारको फिल्मबाट टाढै बस्छिन् ।’
तर के यस्ता कुराले विश्वसनीयता कम हुन्छ ?
अक्षय भन्छन्, ‘यस्तो कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यस्ता खालका नकारात्मकतालृे ममाथि केही असर गर्दैन ।’
साधारणतया यदि कुनै फिल्मको सिक्वल बन्छ भने त्यसमा त्यही कलाकार हुन्छन् जो मूल फिल्ममा हुन्छन् ।
अक्षयका थुप्रै फिल्मको सिक्वल बनिरहेको छ तर तीमध्ये धेरैमा अक्षय छैनन् ।
#akshay kumar#twinkle khanna#housefull 4